အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး စားသောက်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့လို့ 391မိုင်ဝေးတဲ့ ရွာကို စက်ဘီးစီးပြီး ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အဘိုးအို . . . – Pwintsan
Homeအွန်လိုင်းသတင်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး စားသောက်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့လို့ 391မိုင်ဝေးတဲ့ ရွာကို စက်ဘီးစီးပြီး ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အဘိုးအို . . .
အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး စားသောက်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့လို့ 391မိုင်ဝေးတဲ့ ရွာကို စက်ဘီးစီးပြီး ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အဘိုးအို . . .
May 3, 2020 xenodochial-chaum အွန်လိုင်းသတင်း 0
Covid – 19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာ နိုင်ငံအတော်များများက အောက်ခြေအလုပ်သမားများဟာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့အပြင် ၊ ဝင်ငွေတွေလည်း မရှိကြတော့လို့်
တစ်ချို့ဆိုရင် ဆာလောင်ပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရလျက်ရှိပါတယ် ။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအလုပ်ကနေအလပ်ထုတ်ခံခဲ့ရလို့ ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘဲ သူ၏မွေးရပ်မြေရွာဆီသို့ စက်ဘီးစီးပြီးပြန်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာ social media ပေါ်မှာ အတော်လေးလူပြောများနေလျက်ရှိပါတယ် ။
အဘိုးအိုရဲ့အဖြစ်ဟာ ပိုပြီးဝမ်းနည်းစေခဲ့တာကတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမရှိတော့လို့ ခရီးတစ်လျှောက် စားစရာ နှင့် သောက်ရေတို့ကိုပါ မဝယ်နိုင်ခဲ့လို့ပါဘဲ ။
အဘိုးအိုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ Rayong မြို့ကနေ Ubon Ratchathani မြို့ရောက်တဲ့အထိ စက်ဘီးစီးပြန်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး ခရီးအရှည်မှာ 630 km အထိ ရှိတဲ့အတွက် အဘိုးအိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရွာပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ ရက်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သေးကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
အဘိုးအိုကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Ms Wipaporn ၏ပြောပြချက်အရ အဘိုးအိုဟာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားသေးပြီး အတော်လေးအားနည်းနေပြီး မောပန်နေပုံရကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ထို့အပြင် အဘိုးအိုဟာ အမြင်အာရုံအားနဲနေခဲ့ပြီး ၊ မျက်စိအမြင်အာရုံကို ကုသဖို့အတွက် ငွေကြေးမရှိကြောင်းလည်း အဘိုးအိုကပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
အချို့သော ခရီးသွားများက အဘိုးအိုအားတွေ့ရှိပြီး စားစရာများပေးကမ်းလှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး ၊ Ms Wipaporn ကတော့ အဘိုးအိုအတွက် ခရီးလမ်းစရိတ်အနည်းငယ်ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် အဘိုးအိုမှာတော့ သူ၏ရွာသို့ ဆက်ပြီး စက်ဘီးစီးပြန်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
Covid – 19 ကူးစကျရောဂါ ဖွဈပှားနတေဲ့အခြိနျကာလမှာ နိုငျငံအတျောမြားမြားက အောကျခွအေလုပျသမားမြားဟာ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈလာခဲ့ကွတဲ့အပွငျ ၊ ဝငျငှတှေလေညျး မရှိကွတော့လိျု့
တဈခြို့ဆိုရငျ ဆာလောငျပွီးခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့အဖွဈမြိုးနဲ့ ကွုံတှနေ့ရေလကျြရှိပါတယျ ။
ဒီတဈခေါကျမှာလညျး ထိုငျးနိုငျငံက အဘိုးအိုတဈယောကျဟာ လုံခွုံရေးဝနျထမျးအလုပျကနအေလပျထုတျခံခဲ့ရလို့ ရှေးခယျြစရာမရှိတော့ဘဲ သူ၏မှေးရပျမွရှောဆီသို့ စကျဘီးစီးပွီးပွနျခဲ့ရတဲ့အဖွဈဟာ social media ပျေါမှာ အတျောလေးလူပွောမြားနလေကျြရှိပါတယျ ။
အဘိုးအိုရဲ့အဖွဈဟာ ပိုပွီးဝမျးနညျးစခေဲ့တာကတော့ လကျထဲမှာပိုကျဆံမရှိတော့လို့ ခရီးတဈလြှောကျ စားစရာ နှငျ့ သောကျရတေို့ကိုပါ မဝယျနိုငျခဲ့လို့ပါဘဲ ။
အဘိုးအိုဟာ ထိုငျးနိုငျငံ ၊ Rayong မွို့ကနေ Ubon Ratchathani မွို့ရောကျတဲ့အထိ စကျဘီးစီးပွနျနိုငျဖို့ရညျရှယျထားပွီး ခရီးအရှညျမှာ 630 km အထိ ရှိတဲ့အတှကျ အဘိုးအိုတဈယောကျအနနေဲ့ ရှာပွနျရောကျနိုငျဖို့ ရကျအနညျးငယျကွာနိုငျသေးကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။
အဘိုးအိုကို တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ Ms Wipaporn ၏ပွောပွခကျြအရ အဘိုးအိုဟာ လုံခွုံရေးဝနျထမျးဝတျစုံကို ဝတျဆငျထားသေးပွီး အတျောလေးအားနညျးနပွေီး မောပနျနပေုံရကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ထို့အပွငျ အဘိုးအိုဟာ အမွငျအာရုံအားနဲနခေဲ့ပွီး ၊ မကျြစိအမွငျအာရုံကို ကုသဖို့အတှကျ ငှကွေေးမရှိကွောငျးလညျး အဘိုးအိုကပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
အခြို့သော ခရီးသှားမြားက အဘိုးအိုအားတှရှေိ့ပွီး စားစရာမြားပေးကမျးလှူဒါနျးခဲ့ကွပွီး ၊ Ms Wipaporn ကတော့ အဘိုးအိုအတှကျ ခရီးလမျးစရိတျအနညျးငယျကူညီပေးခဲ့ကွောငျး နှငျ့ အဘိုးအိုမှာတော့ သူ၏ရှာသို့ ဆကျပွီး စကျဘီးစီးပွနျသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။
ဒုက္ခ တစ်ခုကြုံတိုင်း ကုသိုလ် တစ်ခုလုပ်ပါ